जापानको संसदद्वारा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित
एजेन्सी । जापानको संसदले करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक चुनौतीलाई ध्यान दिँदै जापान सरकारले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
जापानबाट फर्कन चाहनेले बुझ्नैपर्ने कुरा
काठमाडौँ । जापानमा रहेका नेपालीहरु फर्काउनको लागि तयारी सुरु भएको छ । टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले एक विज्ञप्ती जारी गरेर नेपाल फर्कन चाहनेहरुको विवरण संकलन थालेको छ जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को असहज परिस्थितिको कारण नेपाल फर्कन चाहनेहरुले जुन ५ तारिकसम्म आवदेदन फर्म भर्नुपर्ने बताएको छ ।
जापानमा एक नेपाली विद्यार्थीको पौडी खेल्ने क्रममा मृत्यु
काठमाडौँ । जापानमा एक नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । तोचिगी केनको उचुनोमियास्थित खिनुगावा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बिहीबार नेपाली युवाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने युवा झापाका २२ वर्षीय सापकोटा थरका रहेका छन् । उनी सन् २०१८ मा विद्यार्थी भिसामा जापान गएका थिए ।
एजेन्सी । विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापानको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कोरोनाभाइरसका कारण पेशा व्यवसायका सेवाहरु कटौती हुँदा जापानी अर्थव्यवस्था मन्दीतर्फ उन्मूख भएको देखिएको छ ।
अस्पताल भर्ना हुन एम्बुलेन्समा आएका बिरामीले ८० वटा अस्पतालमा फन्को लगाएपछि...
एजेन्सी । जापानका चिकित्सकहरुले कोरोनाभाइरस संक्रमणको नयाँ बिरामीहरुको संख्या तिब्र रुपमा वृद्धि हुँदै जाँदा देशको चिकित्सकीय पद्धती ध्वस्त हुने जोखिम बढेको चेताबनी दिएका छन् ।
जापानका नेपाली व्यवसायी चिन्तित
टोकियो । पछिल्ला दिनमा जापानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै यहाँका नेपाली व्यवसायी र नेपालीहरुमा चिन्ता थपिएको छ । जापानमा एउटै शहरमा दैनिक ४० देखि ५० जनासम्ममा संक्रमण फैलन थालेको छ । युरोप, अमेरिकालगायतका देशको तुलनामा जापानमा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म कम भएपनि पछिल्लो ७२ घण्टामा भएको वृद्धिले आम मानिसमा त्रास फैलिएको छ ।
नारिताको नियमित उडान प्रारम्भ
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले जापानको नारितासम्मको नियमित उडान शुरु गरेको छ । निगमले सोमबारदेखि जापानको नारितामा हप्ताको ३ दिन सिधा उडान प्रारम्भ गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको सूर्य र चन्द्रसहितको ध्वजावाहक विमान जापान पुग्दा नेपालीहरु निकै हर्षित भएका छन् । काठमाडौंँ–नारिता उडानका लागि सोमबार बिहान नेपाली समय १ः२५ बजे उडान शुरु गरी जापानको समयानुसार १०ः५० मा नारिता विमानस्थल पुग्दा नेपालीहरु खुशी देखिएका हुन् । नेपालकोभन्दा जापानको समय करीब तीन घण्टा छिटो छ ।
किन घट्यो जापानमा नयाँ गाडीको बिक्री ?
टोकियो । सन् २०१९ मा जापानमा सवारी साधन विक्री दर तीन वर्ष यता पहिलो पटक घटेको जापानी उद्योगहरूको समूहले सोमबार जानकारी गराएका छन् । गाडीको बिक्रीमा कमी आउनुलाई जापानमा सन् २०१९ मा भोग्नु परेका प्राकृतिक प्रकोप र उपभोक्ता करमा भएको वृद्धि जिम्मेवार रहेको भएपनि कारको बिक्री दरमा सामान्य कमी मात्र आएको उक्त समूहले बताएको छ ।
जापानका बच्चाहरु एक्लै विद्यालय जान्छन्, तर नेपालमा किन असुरक्षा ?
काठमाडौँ । एशियन राष्ट्र जापान सबै कुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता जापनिजहरुले आफ्नो स–साना बच्चाहरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाइरहेका छन् । परिवारका सदस्यहरु व्यस्त हुन थालेपछि उनीहरुले आफ्नो बच्चाहरुलाई आफ्नो काम आफै गर्न लगाउने संस्कृति बढ्दै गएको छ । जसको कारण बच्चाहरुले पनि गर्न सक्ने कामहरु आफै गर्न थालेका छन् ।